I-Toy Felt Toys
Wonke umntu uye weva malunga neentlobo ezinjengomthunga, ukugaya, ukupenda ngeglasi, ukugcoba. Namhlanje ndifuna ukuthetha malunga nobugcisa obudumileyo, kodwa sele ndifumana ukuthandwa, njengokufakela. Ukucoca okanye ubuchule bokuqhawula ubomi obumileyo - ubuchule obudala bokuzenzela impahla. Ngokutywina uboya kunye neenaliti ezizodwa, izinto zokuhlobisa ezifana neetys, izambatho, iifowuni zenziwa. Enyanisweni, lobu buchule bulula kakhulu, kwaye ukudala amathoyizi oboya ufune kuphela umonde kunye nekhono elithile.
Ukuze inkosi inqume ukudala amathoyizi ngokuqhekeza, ufuna ukuthenga okufutshane:
iinaliti ezizodwa zokufakela;
Makhe sithethe ngakumbi malunga nento nganye.
Iboya yinto ebalulekileyo yeboya. Nge-nimochen kulula ukwenza umsebenzi, into eyona nto kukuzikhethela indlela elula yokutshatyalaliswa. Kwiivenkile zanamhlanje ukhetho olukhulu kakhulu. Kwiimidlalo zokuqala kungcono ukuthatha i-masters eneklasi, abanolwazi abanokuludweba ngokwabo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba uboya behla ngo-30%. Ngako oko, kufuneka uyithenge ngaphezu kwezinga elifunekayo lezilwanyana zakho ezizayo.
Izinaliti ezikhethekileyo zokufakela kwakhona ziya kufumana ivenkile yokuthenga. Kukulungele ukuthenga isethi eyenziwe ngokulungeleyo kwangoko. Ngamnye uya kuba neengqungquthela zakhe ezikhethekileyo, ezididekayo kunye nokubambelela kwiboya, ziya kuzinza. Ngokuqhelekileyo kwisethi kwaye kukho into efana nenaliti yenaliti. Kunokwenzeka ukufakela iinaliti eziliqela, ezifanelekileyo kakhulu xa udala amathoyizi amakhulu. Numerigly ibonisa ubukhulu bayo. Iphakamileyo inamba, inqabile inaliti kunye neenkomfa ezincinci.
Ngenxa yecandelo loqoqosho, ingaphakathi lemveliso yexesha elizayo lingafumaneka kwizinto ezingabizi-sintepon.
Isipongo sinceda ngezizathu zokhuseleko. Iinaliti zibukhali, kwaye unokulimaza iminwe yakho ngengozi. Akunjalo nawe awukwazi ukuluhlula umkhiqizo kwisisindo, ubambe umsebenzi owenziwe ngezandla zakho.
Cinga ngamanqanaba okudlala amathoyizi.
Siqala umsebenzi wethu onzima nomzimba. Sahlula iboya kwiinqununu ezincinci kwaye sihlabe ngeesalane, sitshintshile, siphendule ngendlela eyahlukileyo ukuya kufumaneka ukuba ifom efunwayo. Umnxeba inaliti, ngokukhawuleza umveliso utywinwe.
Ngokwahlukileyo senza inxalenye nganye yomzimba, size sidibanise kunye kunye noncedo lweenaliti ngendlela yokudideka.
Xa sifumana i-toy ephelile, siyayihobisa kwaye siyayixhasa. Siyongeza, umzekelo, ukubetha emva kwekati okanye izaqathe kumaqoqo e-Bunny.
Ukuba unqwenela, unokwenza amehlo akho ngeentlobo, uze udibanise ukudibanisa iinwele kwiikati, zidibanisa ithoyizi efunyenwe kakuhle. Ngoko kuya kuba buhle kwaye buhle.
Iimpahla zoboya kufuneka zifakwe kwi-perpendicular komnye nomnye. Ngoko uyanciphisa ixesha lakho lomsebenzi, u-compaction uza kwenzeka ngokukhawuleza. Yaye ukuba uthetha isigqibo sokusebenzisa i-sintepon, ke le ndlela yokubeka ayiyi kushiya nayiphi na imimiselo phakathi kweboya (i-sintepon ayiyi kubonwa).
Ukusondela komsebenzi kukuba, unobuncitshisi inaliti kufuneka ibe. Ingqungquthela yokugqibela yokwenza izincinci zenziwe ngamacinci amancinci, kunye nenombolo yefowuni.
Iinkcukacha ezibiniweyo (i-paws, iindlebe) ziphumelela ngakumbi kunezinye emva komnye. Kwaye uboya bohlula ngokwawo ngaphambi kokuvelisa. Ngoko i-flaps eyenziwe ayinakwenzeka ukuba ibe nobukhulu obuhlukeneyo.
Ungasebenzisa i-wire ukwenza isakhelo, ngakumbi ukuba isilwanyana sakho simile kwimilenze yaso. Siyabulela kulo mzimba, umdlalo uya kuba ozinzile kwaye uzinze.
Into ephawulekayo ekwenzeni amathoyizi yindlela yokwenza i-drywalling, eyona kamva unokwenza udidi oluhluke ngokupheleleyo kwi-character character: engeza izinto ezongezelelweyo (i-hedgehog - i-apula, i-hare-isanqante, ibhere elinombhobho wezinyosi), utshintshe intetho yebhokhwe kwisilwanyana. Akukho sikhombiso, ingcinga yakho kuphela ... kwaye i-wad yeboya iya kuba yinto yokudlala yomntwana okanye ibe yisipho esisodwa somhla wokuzalwa !!!!
Indlela yokwenza iisokisi kunye neenaliti zokudibanisa
Indlela yokubopha amantombazana, iiglavu
Yintoni eyenziwe ngesandla?
Indlela yokwenza isikhumbuzo seminyaka esitsha-ukuzikhusela, iklasi yeklasi
Iipatties kunye nenyama kunye nelayisi
Ukulima kunye nokunakekelwa kwe-chlorophytum
Ummangaliso waseNdiya: iDelihi - isixeko seetempileni nezithethe zamandulo
Indlela yokuhlambulula umzimba wakho weetyhefu kunye neesxibisi?
Ukulungiselela UKUSEBENZISWA KWEZEMISIMI ukususela ekuqaleni
Umfanekiso omhle ngexesha elifutshane
Inambuzane yokubetha, unyango, unyango
Ukunciphisa isisindo ngekhofi. Ukusela njani ikhofi eluhlaza ukulahlekelwa kwesisindo?
Ikhekhe ngamasiliya amhlophe
Ikhekhe leSand neepereaches
Indlela yokuvuyisela indoda endiyithandayo ngoFebruwari 23
Iintlobo zezityalo zemihlobiso
Iindlela ezisebenzayo zokulwa ne-cellulite, kunokuba zenze i-smear?
Izipho zomtshato - iingcebiso eziwusizo